kubudikidza Li Yen
Last updated: Chivabvu. 21 2019 | 3 Maminitsi verenga
Inonyanya dzinowanzotaurwa paIndaneti kufambidzana ndechokuti vanhu vachiri kurinzwisisa sezvo ari ngozi kutandadzana. vangani nguva zvakanaka kureva (uye kazhinji zvakabatanidzwa vachifara) Shamwari gasped nokutya apo vakaudza pamusoro paIndaneti matchmaking yepaIndaneti Zvawava chete akasaina pasi? "Ko kana ukasangana dodgy munhu?", "Zvinobvumirwa ngozi zvachose?"Uye" mashoko ako ose woga uchava munhu wese munyika kuona!"Mibvunzo akakurumbira uye mashoko mumwe yemanyorero anogamuchira apo chiziviso kuti vava kuda kupa paIndaneti kufambidzana magazines ane zvinofambidzana. Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti pane murky ngozi paIndaneti kufambidzana, izvozvo kwaizova zvemanyepo kutaura kuti zvaizova nengozi kupfuura, vanoti, ainhonga mumwe kubva mubhawa. Saizvozvo, ichangopfuura nhamba dzinoratidza kuti mune 2013, 17% yevakaroorana pakutanga akasangana paIndaneti.
pachena, kudanana paIndaneti chinhu inonyatsoita kuti inoshanda zvakanaka mamwe vanhu. Vaya vakawana kubudirira pane nzvimbo aya kare kukwanisa kusangana kodzera vadyidzani nokuda kwezvikonzero. Kufanana nezvimwe zvose, Zvisinei, ichi haisi failsafe nzira kunyika yenyu kukosha zvimwe. zvisinei, kana uchinge vakaneta nzira dzakawanda pakutsvaka kwako mufaro, kudanana paIndaneti inzira chakangofanana mamwe. vanoshandisa nguva yokutanga kuti vasakurirwa zvishoma nokuda Kuwanda kwakaita paIndaneti kufambidzana. First kure, hapana pfungwa pakuparadzira pachako zvakare thinly. chokwadi, zviri nhau vaiswe achamutsa mufananidzo kana mbiri nyore chaizvo, kunyora mitsetse mishomanana iyo yakanaka showcase unhu hwako, wokudhinda Pindai uye dai nokuda yakanakisisa. Pane rimwe divi, zvingava nani kuti kuitisa zvishoma tsvakurudzo uye tsvaka mamwe pamusoro mhando dzakasiyana-siyana paIndaneti kufambidzana site dziripo. Zvaisazova pfungwa yakanaka kuwana mamwe mashoko pamusoro nzvimbo iyo vane vatengi vari munharaunda yakakura kunakidza.
Kana kusaina up dzinonyadzisira siyana, usakanganwa kuverenga yakanaka anodhinda. Ehe, Nzvimbo idzi bhizimisi raiva nepurofiti yakakurumbira vane ichikwira kubudirira prices. vachiri, hazvina zvichirwadza kuwana pamusoro mari pamwedzi nhengo mari yechikoro. Mamwe nzvimbo dzinozivikanwa kuti apomere mamwe yechikoro kuitira kuti kuwana rakasiyana nhengo Profiles nepo vamwe vave mamwe mari vakabudirira dies kupota. Nguva dzose yeuka kuti nzvimbo idzi mabhizimisi zviri kupa basa kwamuri. Zviri pachena basa rakanaka asi iwe uchiri havadi kubatwa kubhadharwa kupfuura iwe here kuti. Kune kwaye nzvimbo zhinji riripo isingapwi kudhura bhomba.
Vanhu Vakawanda vakanga rombo zvakakwana kusangana zvavo zvinokosha vamwe kuburikidza zvokufambidzana site chete akanoudzawo nesimba uye nemwoyo murefu. Yeuka kuti izvi haisi nzira failsafe pakati hooking kukwira nemunhu. Sezvakaita muupenyu, misangano zvinogona vakaroorana ndivo nemhaka nguva, rombo uye kupfuurira. Zvazvakadaro, regai kunzwa tichiora mwoyo kana ukatadza kunyika kufambidzana pashure yako mwedzi kusaina nokuda ichi kufambidzana basa yokutanga. Roma yakanga isina kuvakwa pazuva uye havangazodzidzi ukama hwako. Tora nguva kuenda kuburikidza unhu vamwe vanhu uye anobatana vauri kunzwa kukufadza kupfuura. Hapana chingaitika asi panguva chaiyo muduku unoziva kwawakaita danho rokutanga.
Kana waita mukana 'kusangana "mumwe munhu waunoda paIndaneti uye ipapo zvinobudirira yakasimbiswa musi, regai vomanikidza yakawandisa uri kusangana ichi. Kufanana nezvimwe mazuva okutanga, ichi zvimwe kuva ambopinda kusangana. vachiri, funga shure dzose misi kwawakamboita kare. Zvirokwazvo chaunofarira ndivo vaiva avo apo waizogona kurega bvudzi rako pasi uye ufare Minimum tarisiro. A Kazhinji kwoUmambo thumbs kwaizova kurega wemumhuri kana shamwari yepedyo kuziva nguva nenzvimbo rokusangana yako uyewo. Kazhinji zuva rako vaisazotungamirira kuti chinhu ngozi asi nguva dzose inobhadhara kutamba nayo njodzi.
First nguva vanoshandisa paIndaneti kufambidzana nzvimbo kuti zvakanaka vanowana munhu kukutyisa ruzivo. Imwe nzira yakanaka kutarisa zvingava kuti inongova imwe nzira inonyatsobudirira uye anobatsira kufambidzana zvishandiso ano zera. Yeuka kuti vakawanda nzvimbo nhengo akasaina nokuda chete chinangwa sezvaunozviita: kutsvaka rudo. Saka sunungura pamafudzi avo, nyora pasi kuti Profile uye kutanga uri paIndaneti kufambidzana rwendo!
Tips nokuti Dating With sorwonzi uye Other Mobile Apps
pamusoro 4 Tips Kuziva About Dating
5 Zvinhu Zvaunofanira Usatambisa Talking About On A Date First